တရုတ်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဗီနိုင်းကြမ်းခင်းစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Linsu
4. ချောမွေ့စွာဂဟေ, ရိုးရှင်းသော splicing, မြန်ဆန်သောဆောက်လုပ်ရေး။
6. အပူစီးကူးခြင်းနှင့်နွေးထွေးမှု, အစွန်းအထင်းခံ။
က ISO 10581-EN649
ပွတ်တိုက်၏ dynamic ကိန်း
အထူ: 2mm, 3mm
အရှည် 20 မီတာ
500 ကျော်အရောင် Patters
ဆေးရုံ၊ ကျောင်း၊ ဈေးဝယ်စင်တာ၊ ရုံးစသည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပညာရေးပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်ကောင်းမွန်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်ကျသည့်ကြမ်းခင်းအတွက်သုတ်လိမ်းထားသောဗီနိုင်းကြမ်းပြင်သည်အသွားအလာအလွန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
စတော့ရှယ်ယာရပ်နေ 700000 စတုရန်းမီတာ
ရှေ့သို့ Ximalaya PVC ဆေးရုံဗီနိုင်းအခင်း
နောက်တစ်ခု: အငြင်းပွားဖွယ် Vinyl ကြမ်းပြင် Roll